Ny fiarovana amin'ny alàlan'ny alahelo
Nandritra ny firoboroboana nipoitra tao amin'ny departemanta teknolojia, ny hackers sy ny mpanafika dia naka ny fanodikodinam-pony tamin'ny hafa. Ny hackers dia mandany ny programan'ny fiarovana mpampiasa farany toy ny firewall izay manana tanjona tokana ahafahana miditra amin'ny fampahalalana mafonja toy ny tenimiafina kaonty sy carte de crédit. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny hackers dia mifehy tanteraka ny navigateur, izay ahafahan'izy ireo manova ny endrik'ireo mpisera amin'ny tranonkala malaza.
Ny maha-zava-dehibe ny filaminana anaty tranokala dia tsy azo ampiharina tanteraka raha resaka marketing dizitaly. Ny fanitsiana ireo pop-ups sy ny tsindry dia manosika mpampiasa aterineto any amin'ny toerana hacked. Amin'izao androntsika izao dia mampiasa mailaka amin'ny mailaka ny mpiserasera mba hanangona vaovao avy amin'ny solosainao, tsy misy fahalalana. Ny fanitsiana ny mailaka sy ny klikan'ireo spam dia mamela ireo mpanafika maloto hamotika ny firewall sy ny fandaharanasa fiarovana, izay mety hampahalemy anao amin'ny fanafihana.
Ny fandefasana mailaka avy amin'ny orinasa mpanentana malaza dia tsy midika fa ny mailaka dia ara-dalàna. Ny fanindriana ireo hafatra malaza dia manome hery ireo hackers mba haka fanazavana sarobidy avy amin'ny solosainao, indrindra amin'ny antsipirian'ny banky.
Ryan Johnson, talen'ny Sales Sales an'ny Semalt , dia mamelabelatra ny tetika, ampiasan'ireo mpanafika hampahafantatra anao ny mombamomba anao miafina, sy ny fomba hanalavirana azy ireo.
mandefa hafatra fanavaozana ny rindrambaiko, arahin'ny rohy mba hametrahana vaovao farany amin'ny aterineto. Amin'ity tranga ity, ny rohy nomena dia misy fandrahonana mahatsiravina izay misy fiantraikany amin'ny programan'ny fiarovana an-tserasera..
Ny famindrana pop-ups izay manondro ny kaontinao an-tserasera dia hikatona raha tsy miditra ny anaranao sy ny tenimiafinao amin'ny fotoana mahamety azy. Ao anatin'ny lavaka, afaka mahazo fidirana amin'ny fampidiranao fidirana ny mpiserasera.
Fandefasana hafatra milaza fa niova ny kaontinao. Amin'ity tranga ity dia mandefa raki-peo ny mpampihetsi-po izay mamindra anao amin'ny tranonkala malaza rehefa miezaka manova ny tenimiafinao.
Spams Vs. Scams: Fanatsarana sy tarehimarika
Miely be dia be ny hafatr'ireo voambolana sy spam. Izy ireo dia hafatra tsy fantany izay manakorontana ny mpisera PC rehefa hita ao amin'ny pejin'izy ireo. Na dia izany aza, ny fahasamihafana voamarika dia tsy mametraka loza ho an'ny mpampiasa solosaina ny hafatra spam, raha oharina amin'ny hafatra scams izay natao hanangonana fanazavana sarobidy avy amin'ny fitaovana.
Ny fomba hiarovana ny tenanao amin'ny alahelo
Ny fahamalinana rehefa mikaroka sy mampiasa ny aterineto dia ny fepetra ilaina eo amin'ny fiarovana ny tranokala. Arovy ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny ordinatera Spam automatique an'i Thunderbird. Ny teknikam-pampitam-peo dia mampiasa tranokala fanivanana mba hanivanana hafatra momba ny spam. Ity fitaovana ity dia mampiseho hafatra iray eo an-tampon'ny pejy mampitandrina anao rehefa avy nahitanao hafatra malaindaina.
Ankoatra izany, ny fitaovana Thunderbird dia mampitandrina ny mpampiasa ny endritsoratra amin'ny endriny rehefa toa misy rohy iray naseho ho toy ny manitsy ny mpampiasa amin'ny toerana maloto kokoa noho ilay naseho. Mialà amin'ny fandefasana imailaka raha tsy hoe ny mpampiasa ny endri-tsoratra dia azonao antoka fa ny mpandefa iray dia manohana ny fisorohana ny hacked. Ny fampiasana ny tranonkala phishing dia manampy ihany koa ny manakana ireo hackers maloto amin'ny fidirana ao amin'ny solosainao mangina.
Ny fisalasalana momba ny hafatra na spam na scams dia manampy amin'ny fanakanana ireo mpanafika tsy mahazo miditra amin'ny kaontin'ny mpampiasa sy ny tenimiafinao. Mitandrema rehefa mikaroka amin'ny alàlan'ny fisorohana ny mombamomba ny tranga sy ny fampiasana mailaka fampiharana toy ny fampiharana Thunderbird izay manakana ny fisintahan'ny phishing. Ary koa, mitandrema amin'ny tetika fanesoana amin'ny alàlan'ny fanamarinana raha misy rohy alohan'ny hidirana azy Source .